Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2008
Sary 100n ireo tany Antsirabe
2008-08-27 @ 08:02 in Ankapobeny
Eto Mahajanga miaraka amin ny namana serasera dago aho amin izao fotoana izao. Raha any an-tsena ny be sy ny maro izaho kosa nitsidika havana. Nahita solosaina finday qwerty aho eto ka mitsipona akotry tanteraka manoratra. Mbola mieritreritra ny hijanona manko aho fa tsy hody hiaraka amin ny be sy ny maro rahampitso.
Amin ny Sabotsy mihitsy aho vao mieritreritra ny hiakatra na dia miasa avy hatrany aza aho ny alahady. Izay no ela fa efa azonareo jerena ao amin ny tahirintsary any ambany indrindra any ny sary nalaiko tany Antsirabe ary noezahiko natao lehibe hahafapo anareo mihitsy ny sary afa-tsy ilay sary iray izay ihany. Bira 2008 no nataoko anarany ary misy karazany telo izy ao.
Saiky nanoratra ihany aho fony nandalo tao Antananarivo satria efa tamin izany fotoana izany no nampidiriko ireo sary ireo (nandaniana alina iray manontolo). Dia mazotoa mijery ary e.